Nin ka shaqeeya kaalin shidaal oo tii dheereyd ku dhigay wiil dhallinyaro ah oo sigaar u shidnaa: VIDEO
Caasimadda dalka Bugaria ee Sofia ayaa waxaa ka dhacday dhowaan dhacdo aad looga hadal hayo taas oo salka ku haysa khatar ka dhacday kaalin shidaa kaddib markii uu wiil dhallinyaro ah oo sigaar ku cabayay lagu buufiyay sunta dabka lagu damiyo.
by calanka —	October 8, 2017 —	Video
Wariyad reer Hargeysa ah oo warbixin macaan ka diyaarisay caasimadda Muqdisho: VIDEO
Magaalada Muqdisho ee Caasimada Soomaaliya oo soo martay Marxalado kala duwan ayaa siwayn uga soo Kabanaysa Dhibaatooyinkii ay ka dhaxashay Burburkii Dawladdii dhexe iyo dagaaladii Sokeeye ee dalka ka dhacay.
by calanka —	October 7, 2017 —	Video
Qamiiska boqor Salmaan oo qabsaday sallaanka diyaaradda looga soo dago: VIDEO
Boqorka dalka Sacuudiga iyo wafdi uu hoggaaminayo oo booqasho ku jooga dalka Ruushka ayaa waxaa qabsatay arrin yar kaddib markii qamiiskii uu xirnaa uu ka qabsaday sallaanka diyaaradda looga soo dago.
by calanka —	October 6, 2017 —	Video
Dhakhtar soo bandhigay 8-jir liqay qalab carruurtu ku ciyaaraan oo codkiisa badalay: VIDEO
Dhakhtar u dhashay dalka Argentina islamarkaana lagu magacaabo Santiago Gomez Zuviria ayaa baraha bulshada soo dhigay muuqaal video oo muujinaya wiil sideed jir ah kaas oo liqay qalab ay carruurtu ku ciyaaraan islamarkaana dhiinta u istaagay. Codkiisa oo lala yaabay.
by calanka —	October 3, 2017 —	Video
Ninka soomaaliga oo toorey la dul tagaya booliska Canadian-ka: VIDEO
Nin soomaali ah oo qaxooti ahaan ku tagay dalka Canada ayaa loo soo xiray weerar Sabtidii ka dhacay magaalada Edmonton ee gobolka Alberta, Canada kaas oo shan qof ku dhaawacay, mid ka mid ah uu ahaa nin boolis ah oo uu gaarina ku dhuftay.
by calanka —	October 2, 2017 —	Video
Munaasabaddii xarig-jarka saldhigga ciidan ee uu Turkigu ka hirgeliyay duleedka Muqdisho: VIDEO
Maalinimadii shalay ayaa waxaa si wada jir ah masuuliyiin ka socda dowladda Soomaaliya iyo Turkiga ay xarigga uga wada jareen saldhig ciidan oo uu Turkigu ka hirgeliyay duleedka magaalada Muqdisho, gaar ahaan dhanka deegaanka Jazeera.
by calanka —	October 1, 2017 —	Video
Gabar yar oo xatooyo daango eber uga dhigtay amiirka dalka Ingriiska Prince Harry: VIDEO
Amiirka dalka Ingriiska Prince Harry oo daawanayay ciyaar teynis oo ka socotay caasimadda dalka Canada ee Tronto ayaa waxaa xatooyo eber uga dhigtay daango uu cunayay gabar yar oo garab fadhisay taas oo lagu magacaabo Emily Henson. Dhacdadan ayaa qabsatay warbaahinta caalamka iyo baraha bulshada.
by calanka —	September 30, 2017 —	Video
Nin soo joog laga waayo, soo jiifso ayaa laga helaa: VIDEO
Nin polish ah oo saf ka maray daaqadaha muraayadaha ah ee dukaamada magaalada Lubliniec ee dalkaasi Poland ayaa waxaa uu la kulmay dhacdo uusan waligii ilaaweyn kaddib markii la waayay cid joojisa.
by calanka —	September 29, 2017 —	Video